Gobolka Tula, goynta baradhada waxay ka badan tahay 560 kun tan - Nidaamka Baradhada
Sida ku cad macluumaadka hawlgalka ee Wasaaradda Beeraha ee Gobolka Tula, gobolku wuxuu galay kaalinta labaad ee dalka marka la eego goynta baradhada. Goosashada waxay ka badan tahay 560 kun oo tan.
Sidoo kale gobolka waxaa laga soo aruuriyay ilaa 70 kun oo tan oo khudaar ah.
Sida uu xusay Wasiirka Beeraha ee gobolka, Alexei Stepin, sanadka 2020 ee gobolka Tula, marka lagu daro kaalmooyinka caadiga ah, tallaabooyin taageero oo dheeri ah ayaa loo adeegsaday: kuwani waa amaah deyn ah oo lagu buuxiyo raasumaalka shaqada iyo iibsashada qalabka, amaahda badeecada ee xarunta beeraha Tula, kireysiga gobolka.
Iyada oo ay weheliyaan beeraleyda, tallaabooyin taageero oo dheeri ah ayaa lagu aqoonsaday aagga beero baradhada. Bixinta kabitaanka ayaa durba bilaabmay.
Tags: Gobolka Tulagoosashada baradho